Qeybta 1: xiriirada nidaameed ee Windows Phone in aad xisaabta Muuqaalka
Syncing xiriirada aad ka Windows Phone in account Muuqaalka aad waxaa la samayn karaa iyada oo daruur ama Microsoft Exchange. Si aad u isticmaasho muuqaalada syncing ah, ee aad ka faa'iidaysan kartaa xisaabta Microsoft oo kale email kasta oo aad u isticmaalaan Outlook.com, Windows 8 / 8.1, Skype, hel My Phone, OneDrive, Xafiiska 365. Haddii aad saxiixdo in aad ku Microsoft Phone la mid ka mid ah xisaab Microsoft aad, waxaad awoodi doontaa inaad dib u kor xiriirada ka telefoonka. Dhammaan xiriirada aad ka heli kartaa in People. Waxaad iyaga oo dhan badbaadin karaa xisaabtaada Windows iyo ka dib markii ay la synced karaa koonto Muuqaalka aad.
Waxay ku xidhan tahay Windows Phone, laakiin Windows 7 aad isticmaali karto sidoo kale Outlook Hotmail Xire iyo xisaabtaada email Windows Live Hotmail. Marka aad qortey shubo account Windows aad telefoon aad, arki karto dhammaan xiriirada aad akoonka ama waxaad nuqul ka karaa koonto this. Ka dib marka aad xidhiidh oo dhan waxaa, waxaad awoodi doontaa in aad synced Muuqaalka awoodaan.
Wixii cusub Phones Windows waxaad isticmaali kartaa software xisbiga saddexaad si ay u gudbiyaan xiriirada aad in aad xisaabta Muuqaalka:
Tallaabada 1. Fur telefoonka Windows
Fur telefoonka iyo xiriirrada. Connect telefoonka in kombiyuutarka.
Tallaabada 2. Transfer aad xiriirada in account Muuqaalka ah
Tallaabada Final yahay si ay u gudbiyaan xiriirada aad.
Qaybta 2. Import Muuqaalka xiriirrada si aad Android Phone 1 click
Wondershare Qalab MobileGo waxa loogu adeegsaday wareejinta macluumaadka u dhaxeeya Muuqaalka iyo telefoonka. Sidoo kale, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u xaliyaan arinta la soo xiriir nuqul. Qalabkani waxa loo isticmaalaa maamulka fiican ee qalabka iyo isagoo gacanta ku aaladaha aad. Waxaan u baahanahay inaan dhan xidhiidhayna hal meel. Oo haddii aad hadda u badan tahay iibsaday iPhone cusub oo aad rabtid in aad sidoo kale waxay leeyihiin oo dhan aad xiriirka la leedahay Muuqaalka halkan. Waxaad isticmaali kartaa Wondershare MobileGo oo ka soo hadhay isagoo dhan xiriirada aad kuu iPhone, waxa kale oo aad isticmaali kartaa shaqo darsanka ah si looga fogaado xiriir nuqul. Versions Outlook oo ay taageerayaan Mobile Go waa Outlook 2003, 2007, 2010, 2013.
MobileGo Wondershare waa in lagu rakibo qalab aad iyo aad awood u yeelan doonaan in ay soo dhoofsadaan xiriirada aad ka Outlook. Waxaa jira tallaabooyin ay fududahay in la raaco, iyo xiriirada oo dhan u noqon doonaa telefoonka aad Android.
Tallaabada 1. Open Wondershare MobileGo iyo Xiriirada
Waxaad arki doonaan tab Xiriirada column ka bidix. Ka dib marka aad guji Xiriirada, aad leedahay fursado badan sida Import, dhoofinta, tirtirto, De-nuqul.
Tallaabada 2. Import Xiriir
Waxaad shan fursadaha in ay dajiyaan xiriirada, sida ka vCard, ka Outlook Express, ka Windows Live Mail, ka Windows Cinwaanka Kitaabka iyo Outlook 2003, 2007, 2010, 2013 Dooro version of Muuqaalka in aad isticmaasho iyo guji Import .
Qaybta 3. Poll: Waa kuwee qalabka Android ayaad isticmaashaa?
> Resource > Transfer > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Windows Phone in Android Phones